investingstockonline.com မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် (https://www.investingstockonline.com/).We ငါတို့သည်ငါတို့၏အခွင့်အရေးကိုလေးစားရန်အခြားသူများကိုမျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့သူတစ်ပါး၏ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုလေးစား။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေ, ခေါင်းစဉ် 17, ယူနိုက်တက်စတိတ် Code ကိုပုဒ်မ 512 (ဂ) အညီတစ်ဦးမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အေးဂျင့်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ DMCA ကိုယျစားလှယျကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းသတိပေးချက်ကိုတင်ပြရန်လိမ့်မည်။ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးအဖြစ်ကျနော်တို့မှကင်းလွတ်တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်နေသော DMCA ၏ “ ဘေးကင်းလုံခြုံဆိပ်ကမ်း” ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီချိုးဖောက်မှုတောင်းဆိုမှုများကဆိုသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းတစ်ဦးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုချိုးဖောက်မှုပြောဆိုချက်ကိုတင်ပြရန်, သင်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုထွက်သတ်မှတ်ကိုအသိပေးတင်ပြရန်ရမယ်:
ချိုးဖောက်မှုများ၏သတိပေးချက် – ဆိုနေ
1. မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၏တစ်ဦးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ် (သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အာဏာ);
မူပိုင်ခွင့်အလုပ် 2. သတ်မှတ်ခြင်းကိုထိပါးပြီဆို;
3. ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရဖို့ချိုးဖောက်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းနေရာချထားဖို့ service provider ကခွင့်ပြုမှကျိုးကြောင်းဆီလျော်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များ။ [အဆိုပါစွပ်စွဲ offending အလုပ်ဖော်ထုတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စာမျက်နှာ၏ URL ကိုတင်ပြရန် ကျေးဇူးပြု. ];
သင့်အမည်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာ, အီးမေးလိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ဖက်စ်အရေအတွက်ကိုအပါအဝင်ဝေဖန်ခံရပါတီဆက်သွယ် service provider ကခွင့်ပြုမှကျိုးကြောင်းဆီလျော်လုံလောက်သော 4. ပြန်ကြားရေး;
5. ဝေဖန်ခံရပါတီပစ္စည်း၏အသုံးပြုမှုကိုမူပိုင်ခွင့်အေးဂျင့်အားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကြောင်းကောင်းတစ်ဦးယုံကြည်မှုရှိကြောင်းတစ်ဦးကကြေညာချက်; နှင့်
6. အကြောင်းကြားစာအတွက်အချက်အလက်များကိုဝေဖန်ခံရပါတီမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ကြောင်း, မုသားသက်သေခံမှု၏ပြစ်ဒဏ်အောက်မှာတိကျသည်, သောကြေညာချက်။
ခေါင်းစဉ် 17 USC §512 (စ) သိလျက်နှင့်အရုပ်ပစ္စည်း 17 USC §512 (ဂ) (3) အရချိုးဖောက်မှုတစ်ခုအကြောင်းကြားစာအတွက်သေချာသောသတင်းအချက်အလက်ဂေါ်သူကိုမဆိုလူတစ်ဦးဆန့်ကျင်, စရိတ်နှင့်ရှေ့နေစရိတ်အပါအဝင်လူထုအခြေပြုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြစ်ဒဏ်များ, ပေးပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရန်စာမျက်နှာမှတဆင့်အားလုံးဖယ်ရှားရန်သတိပေးချက်များပေးပို့ပါ။ prompt ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အအီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့ပါ။
ငါတို့သည်စွပ်စွဲချိုးဖောက်သူနှင့်အတူလက်ခံရရှိမည်သည့်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုပြောဆိုချက်ကိုအတွက်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေပေးစေခြင်းငှါသတိပြုပါ။ တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုတင်ပြခုနှစ်, သင်တို့လက်ခံနားလည်နှင့်သင့် identity နဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစွပ်စွဲခံရချိုးဖောက်သူမှဆက်သွယ်စေခြင်းငှါသဘောတူသည်။
ကောင်တာသတိပေးချက် – ပစ္စည်းများ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
သငျသညျကွောငျ့မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအရေးဆိုမှု၏ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်ခြင်းပစ္စည်းတစ်ခုအသိပေးစာကိုလက်ခံရရှိကြလျှင်, သင် site ကိုပြန်မေးခှနျးအတှကျအတွက်ပစ္စည်းရှိသည်ဖို့ကြိုးပမ်းအတွက်တန်ပြန်အကြောင်းကြားစာနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်။ အကြောင်းကြားစာကျွန်တော်တို့ရဲ့ DMCA ကိုယျစားလှယျမှရေးသားခြင်း၌ပေးသောရပါမည်နှင့်သိသိသာသာ 17 USC ပုဒ်မ 512 (ဆ) အညီအောက်ပါဒြပ်စင်များ (3) ပါဝင်ရပါမည် said:
3. သင်ပစ္စည်းဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းခံရဖို့ပစ္စည်း၏အမှားသို့မဟုတ်မဟုတ်မမှန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ် disabled ခဲ့ကောင်းတစ်ဦးယုံကြည်မှုရှိသည်သောမုသားသက်သေခံမှု၏ပြစ်ဒဏ်အောက်မှာတစ်ဦးကကြေညာချက်။
သင်၏အမည်, လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်, သင်လိပ်စာသင်သည်သဘောတူကြောင်း, တည်ရှိသော (သို့မဟုတ်သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပလျှင်ထားတဲ့အတွက်တရားစီရင်ရေးခရိုင်များအတွက်ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံး၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သဘောတူတဲ့ကြေညာချက် 4. service provider ကတွေ့နိုင်ပါသည်ရသောမည်သည့်တရားစီရင်ရေးခရိုင်) ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို၎င်း, သငျသညျမူလချိုးဖောက်မှုအကြောင်းကြားစာပေးသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီထံမှလုပ်ငန်းစဉ်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
5. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရန်စာမျက်နှာအားဖြင့်သင်တို့၏တန်ပြန်အသိပေးစာပေးပို့ပါ။ အီးမေးလ်ပို့ရန်အလွန်အမင်းအကြံပြုသည်။
ကျနော်တို့ကအရမ်းအလေးအနက်ထားမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုယူပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေ၏ထပ်တလဲလဲချိုးဖောက်သည့်မူဝါဒလိုအပ်ချက်အညီကျနော်တို့မူပိုင်ကိုင်ဆောင်သူထံမှ DMCA သတိပေးချက်များစာရင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်မဆိုထပ်ချိုးဖောက်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးထပ်တလဲလဲချိုးဖောက်သည့်မူဝါဒဖောက်ဖျက်သောသူတို့ကိုသူတို့၏အကောင့်ရပ်စဲရပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ဆိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်မ DMCA တောင်းဆိုမှုများကိုင်တွယ်များအတွက်ဒီစာမျက်နှာ၏အကြောင်းအရာများကိုနှင့်၎င်း၏မူဝါဒအားပြုပြင်မွမ်းမံရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ သင်သည်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများများအတွက်မကြာခဏဤမူဝါဒပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးရန်တိုက်တွန်းပါသည်။